WINE 5.22 inouya nekuvandudzwa mukutamba kwevhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
WINE 5.22 inosvika pamwe nekuvandudzwa mukutamba kwevhidhiyo uye zvinopfuura mazana matatu shanduko
Vhiki mbiri dzapfuura kubva kuburitswa kwe iyo yapfuura budiriro vhezheni, zvinoreva mvura, chando kana dutu, WineHQ yatove neimwe inowanikwa. Chii ivo vakatanga maawa apfuura yaive imwe budiriro vhezheni yesoftware yavo yekumhanyisa Windows maapplication pane mamwe masisitimu anoshanda, kunyanya WAINI 5.22. Pakati pezvakakurumbira zvitsva, mashoma ayo vagadziri avo vanowanzo taura saizvozvi, isu tine kugadzirisa mukutamba kwevhidhiyo.
Kuburitswa uku kwakauya neshanduko zhinji kupfuura svondo rapfuura, zvimwe kana zvishoma izvo zvakajairwa. Nezve kukanganisa, vakagadzirisa makumi matatu neshanu, asi vaunza huwandu hwe 345 kuchinja. Kana iwe uchida kuvaona vese iwe unofanirwa kuenda kune iyi link iwe yaunayo pamusoro pemitsara iyi. Izvo iwe zvauinazvo pazasi ndizvo zvinojekesa zveWINE 5.22 zvinoenderana neWineHQ.
WINE 5.22 inosimbisa
C maraibhurari enguva yekumhanya akashandurwa kuita PE.
Kushandisa fontconfig cache kukurumidza kutanga.
Vhidhiyo yekutamba yekuvandudza.
3DES kunyorera kutsigira.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 5.22 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune iyi link kubva kwatinga dhawunirodha mabhinari pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iyo yepamutemo chirongwa repositi kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa mune ramangwana pavanongogadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi kune zvekare mavhezheni e Android uye macOS.
Iyo inotevera yekuvandudza vhezheni ichave WINE 5.23 uye, kana pasina zvinoshamisira, izvo zvandinotarisira kufambisira mberi izvo zvisingaitike ndichiona kubata nguva kwavanoita muWineHQ, ichasvika muna Zvita 4. Pakati pekuvandudza kwazvichaunze, chinhu chega chatinogona kukuvimbisa ndechekuti ichauya nemazana ediki ekuvandudza uye kugadzirisa sekugara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 5.22 inosvika pamwe nekuvandudzwa mukutamba kwevhidhiyo uye zvinopfuura mazana matatu shanduko
Vhura masosi maraibhurari ekushanda nemavhidhiyo.
Vateveri vePercussion vanogadzira yakavhurwa sosi chirongwa